परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु | अंश १६८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जसरी इसहाक प्रतिज्ञाद्वारा अब्राहामको निम्ति जन्मेका थिए, त्यसरी नै यूहन्ना पनि प्रतिज्ञामा नै जन्मेका थिए। तिनले येशूका लागि बाटो बनाए, र धेरै काम गरे, तर तिनी परमेश्‍वर थिएनन्। बरु, तिनी अगमवक्ताहरूमध्ये एक थिए, किनकि तिनले केवल येशूको निम्ति बाटो मात्रै तयार पारे। तिनको काम पनि महान् थियो, र तिनले बाटो तयार पारेपछि मात्र येशूले आधिकारिक रूपमा आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो। सारांशमा भन्नुपर्दा, तिनले केवल येशूका निम्ति परिश्रम मात्रै गरे, र तिनले गरेको काम येशूको सेवाका लागि गरिएको काम थियो। तिनले बाटो तयार पारिसकेपछि, येशूले आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो, जुन काम नयाँ, अझ ठोस र विस्तृत थियो। यूहन्नाले कामको सुरुको भाग मात्रै गरे; त्यो नयाँ कामको धेरैजसो भाग येशूले नै गर्नुभयो। यूहन्नाले पनि नयाँ काम त गरे, तर नयाँ युग सुरुवात गर्ने व्यक्ति तिनी थिएनन्। यूहन्ना प्रतिज्ञाद्वारा जन्मेका थिए, र तिनको नाउँ स्वर्गदूतले राखेका थिए। त्यस बेला, कसै-कसैले तिनको नाउँ तिनका बुबा जकरिया कै नाउँ राख्न चाहन्थे, तर तिनकी आमाले भनिन्, “यो बालकलाई त्यो नाउँले बोलाउन सकिँदैन। उसलाई यूहन्ना भनिनुपर्छ।” यो सबै पवित्र आत्माको आज्ञामा भएको थियो। येशूको नाउँ पनि पवित्र आत्माको आज्ञामा राखिएको थियो, उहाँ पवित्र आत्माबाट जन्मनुभएको थियो, र उहाँ पवित्र आत्माद्वारा प्रतिज्ञा गरिनुभएको थियो। येशू परमेश्‍वर, ख्रीष्ट र मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तर, यूहन्नाको काम पनि ठूलो थियो भने तिनलाई किन परमेश्‍वर भनिएन? येशूले गर्नुभएको काम र यूहन्नाले गरेको काम बीचको वास्तविक भिन्नता के थियो? के त्यसको एक मात्र कारण यूहन्नाले येशूका निम्ति बाटो तयार पारेकोले हो? कि तिनी परमेश्‍वरद्वारा पहिलेबाटै नियुक्त गरिएकोले गर्दा हो? यूहन्नाले पनि “पश्‍चात्ताप गर: किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ,” भनेर भनेको भए पनि र तिनले पनि स्वर्गको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेको भए पनि, तिनको काम त्योभन्दा अघि बढेन, तिनले केवल सुरुवात मात्र गरे। यसको विपरीत, येशूले नयाँ युगको थालनी गर्नुभयो र पुरानोलाई अन्त्य गर्नुभयो, तर उहाँले पुरानो करारको व्यवस्था पनि पूरा गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएको काम यूहन्नाको भन्दा महान् थियो, र त्यति मात्र होइन, उहाँ सारा मानव जातिलाई उद्धार गर्न आउनुभयो—उहाँले त्यो चरणको काम पूरा गर्नुभयो। यूहन्नाको कुरा गर्ने हो भने तिनले बाटो मात्र तयार पारे। तिनको काम महान् थियो, तिनका वचनहरू धेरै थिए र तिनको पछि लाग्ने चेलाहरू धेरै थिए, तैपनि तिनको कामले मानिसलाई एउटा नयाँ सुरुवातमा ल्याउनुभन्दा बढी केही गरेन। मानिसले तिनीबाट कहिले पनि जीवन वा बाटो वा गहिरा सत्यताहरू प्राप्त गरेन, न मानिसले तिनीबाट परमेश्‍वरको इच्छाको बुझाइलाई नै प्राप्त गर्न सक्यो। यूहन्ना एक महान् अगमवक्ता (एलिया) थिए, जसले येशूको कामका लागि नयाँ आधार खोलिदियो, र चुनिएकाहरूलाई तयार गरे; तिनी अनुग्रहको युगका अग्रदूत थिए। त्यस्ता मामिलाहरूलाई तिनीहरूको सामान्य मानवीय उपस्थितिलाई हेरेर मात्र बुझ्न सकिँदैन। यो अझ बढी उपयुक्त पनि छ, किनकि यूहन्नाले पनि धेरै काम गरे, अनि त्यसबाहेक तिनी पवित्र आत्माद्वारा प्रतिज्ञा गरिएका थिए, र तिनको कामलाई पवित्र आत्माले समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यस्तो भएकोले, उनीहरूले गरेका कामद्वारा मात्र कसैले पनि उनीहरूका विशेष पहिचानको भिन्नतालाई छुट्याउन सक्दछ, किनकि कुनै व्यक्तिको बाहिरी रूप हेरेर उसको सार बताउन सक्ने कुनै उपाय छैन, न त मानिसले पवित्र आत्माको गवाही निश्चित गर्ने कुनै उपाय नै छ। यूहन्नाले गरेका काम र येशूले गर्नुभएको काम फरक र भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका थिए। यसैबाट नै कसैले पनि यूहन्ना परमेश्‍वर थिए कि थिएनन् भनी निश्चित गर्न सक्दछ। येशूको कामको थालनी गर्नु, जारी राख्नु, निष्कर्षमा पुऱ्याउनु र त्यसलाई सफल तुल्याउनु पर्नेथियो। उहाँले यी सबै चरणहरू पूरा गर्नुभयो, तर यूहन्नाको काम सुरुवात गर्नुभन्दा बाहेक अरू केही थिएन। सुरुमा, येशूले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र पश्चात्तापको बाटो प्रचार गर्नुभयो, र त्यसपछि मानिसलाई बप्तिस्मा दिन, बिरामीहरूलाई निको पार्न र भूतात्माहरू निकाल्न थाल्नुभयो। अन्त्यमा, उहाँले मानव जातिलाई पापबाट छुटाउनुभयो र सम्पूर्ण युगका लागि आफ्नो काम पूरा गर्नुभयो। उहाँ मानिसलाई प्रचार गर्दै र स्वर्गको राज्यको सुसमाचार फैलाउँदै सबै ठाउँमा जानुभयो। यस सन्दर्भमा उहाँ र यूहन्ना एक समान हुनुहुन्थ्यो, भिन्नता यति मात्र थियो कि येशूले नयाँ युग सुरु गर्नुभयो र मानिसका निम्ति अनुग्रहको युग ल्याउनुभयो। उहाँको मुखबाट मानिसले अभ्यास गर्नुपर्ने वचनहरू र अनुग्रहको युगमा मानिसले हिँड्नुपर्ने बाटो आयो र अन्त्यमा उहाँले छुटकाराको काम समाप्त गर्नुभयो। यूहन्नाले यो काम कहिल्यै गर्न सक्दैनथियो। अनि यसरी येशूले परमेश्‍वर स्वयम्‌ले गर्नुहुने काम गर्नुभयो, र उहाँ परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ हुनुहुन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मानिसका धारणाले प्रतिज्ञाद्वारा जन्मने, पवित्र आत्माद्वारा जन्मने, पवित्र आत्माद्वारा समर्थन गरिएका र नयाँ बाटो खोल्नेहरू सबै परमेश्‍वर हुन् भनी भन्छ। यस तर्कअनुसार त यूहन्ना पनि परमेश्‍वर हुनेथियो, साथै मोशा, अब्राहाम र दाऊद…, सबै परमेश्‍वर हुनेथिए। के यो ठूलो ठट्टा होइन र?